साहस | Радоје Домановић
Tag Archive | साहस
अर्को दिन लामो यात्रामा हिम्मत गर्ने सबै जना भेला भए। दुई सय भन्दा बढी परिवारहरू तोकिएको ठाउँमा आए। केवल थोरै पुरानो होमसाइट हेरचाह गर्नका लागि घरमा बसे।
वास्तवमा यो दु: खी व्यक्तिहरूको विशाल समूहलाई हेर्दा दुःखको कुरा थियो जसको तीतो दुर्भाग्यले उनीहरूले जन्म भएको भूमि त्याग्न बाध्य भएका थिए र जसमा उनीहरूले आफ्ना पुर्खाहरूको चिहानहरू राखेका थिए। तिनीहरूको अनुहार थकित र घामले डडेको थियो। धेरै लामो कष्टदायी वर्षको कष्टले उनीहरूमा यसको प्रभाव देखायो र दु: ख र तीतो निराशाको तस्वीर देखियो। तर यो एकदमै एकाएक आशाको पहिलो झलक देखियो – निश्चित रुपमा घरको याद मिसाइएको। धेरै जना बुढो मान्छेको चाउरी परेको अनुहारको आँखाबाट आसु आयो र खराब भविष्यवाणीको हावाले उसको टाउको हल्लायो। ऊ बरु केही समयको लागि रहन्छ राम्रो ठाउँ खोज्नुको सट्टा यी चट्टानहरु बीच मर्छ। धेरै महिलाले ठूलो स्वरमा विलाप गरे र आफ्ना मृत प्रियजनहरूलाई विदाई दिए जसको चिहान तिनीहरू छोडदै थिए।
ती मान्छेहरूले एउटा साहसी मोर्चा खडा गर्न खोजिरहेका थिए र कराउँदै थिए, – ठिक छ, के तपाईं यस क्षतिग्रस्त भूमिमा भोक भोकै भइरहन चाहनुहुन्छ र यी झुपडि हरूमा बस्न चाहनु हुन्छ? – वास्तवमा सबैले त्यो श्रापित क्षेत्र एती मन पराउथे कि सम्भव भएको भए उनीहरूले साथ साथै लग्ने थिए।
त्यहाँ सामान्य कोलाहल र कराइ रहेको आवाज थियो अरु मनिस को समूह जस्तै। दुबै पुरुष र महिला बेचैन थिए। बच्चाहरू आफ्नी आमाको पीठमा दुखी भइरहेका थिए। जनावरहरू पनि अलि अप्ठ्यारो मान्दै थिए। त्यहाँ धेरै गाईवस्तुहरू थिएनन्, एउटा बाछो र त्यहाँ एउटा दुब्लो र जग्गर भएको घोडा थियो जस्को ठुलो टाउको र मोटा खुट्टा थिए, जसमा उनिहरुले आफ्ना पुराना सामान अनी झोलाहरु राख्दै थिए, तेसैले बिचरा जनावर पनि भारीले थिचिएका थिए । यद्यपि यो समयमा हिड्न र हिड्ने प्रबन्ध मिलाइयो। अरूहरू गधाहरू लोड गर्दै थिए; केटाकेटीहरू कुकुरहरू तानिरहेका थिए। कुरा गर्दै, कराउँदै, श्राप दिदै, विलाप गर्दै, रुदै, भुक्दै, हँसिदै – सबै प्रशस्त। अरु त अरु एक समय त गधा पनि कराउदै थियो |तर नेताले एक शब्द भनेनन्, जस्तो कि सम्पूर्ण मामला उसका कुनै मतलबको नै थिएन। एक वास्तविक बुद्धिमान मानिस!
आफ्नो टाउको तल गराएर, उनि केवल विचारशील र चुपचाप तरिकाले बसे। अब र त्यसपछि उनले थुके; त्यो सबै थियो। तर उसको अनौठो व्यवहारको कारण, उनको लोकप्रियता यति बढ्यो मानौ कि सबै उनको लागि आगो र पानी भएर जाने थिए। तेस्पछि निम्न कुराकानीहरू सुन्न सकिन्छ:
– हामी यस्तो मानिस पाउँदा खुसी हुनुपर्छ। हामी उहाँबिना अगाडि बढ्यौं भने, भगवान! हामी मर्छौं। म तिमीलाई भन्छु, उसको बुद्धिमत्ता छ! ऊ मौन छ। उसले अझै एउटा शब्द साटेको छैन! – एक जनाले आदर र गर्वका साथ नेतालाई हेर्दै भने।
– उसले के भन्नु पर्छ? जो धेरै बोल्छ उसले धेरै सोच्दैन। एक स्मार्ट मानिस, त्यो निश्चित रुपमा हो! ऊ केवल सोचबिचार गर्दछ र केही भन्दैन, – अर्को थपियो, र उसले पनि नेतालाई डराएर हेर्यो।
– यति धेरै व्यक्तिहरूको नेतृत्व गर्न सजिलो छैन! उसले आफ्ना विचारहरू स जम्मा गर्नुपर्दछ किनभने उनको हात मा ठुलो काम छ, – पहिलो फेरि भन्यो।
सुरू गर्न को लागी समय आयो। तिनीहरू केही बेर पर्खिरहेका थिए, यद्यपि, कोही अरूले आफ्नो सोच बदल्छ वा तिनीहरूसँगै आउँछन् भनेर हेर्नका निम्ति, तर कोही नभएको कारण तिनीहरू लामो समयसम्म बस्न सकेनन्।
– हामी जादा हुँदैन? – तिनीहरूले नेतालाई सोधे।
उनी एक शब्द नबोली उठे।
सबैभन्दा साहसी पुरुषहरू खतरा वा आपतकालिन अवस्थाका लागि तत्कालै उनको वरिपरि समूह बनाए।
नेता, निधार खुम्चाउदै, आफ्नो टाउको तल गरेर, केही कदम चाले | एक मर्यादित फैशन ढंगमा आफ्नो लट्ठी लाई अगाडि ल्याउदै। भीड उहाँको पछाडि लाग्यो र धेरै चोटि चिच्यायो, „हाम्रा नेताहरू लामो समयसम्म बाँच्नुहोस्!“ उसले केहि थप कदम चाले र त्यहाँ गाउँको हलको अगाडि बारमा टकराए, स्वाभाविक रूपमा, उहाँ उनी रोकिए; त्यसैले समूह पनि रोकियो। नेताले त्यसपछि अलि पछि हटे र लट्ठीले बारमा धेरै पटक हिर्काए।
– तपाईं हामीलाई के गराउन चाहनुहुन्छ? – तिनीहरूले सोधे।
उनले केही भनेनन्।
– हामीले के गर्नुपर्छ? बार तल भात्काउनुहोस्! हामीले गर्नुपर्ने कुरा यही हो! तपाईले देख्नुहुन्न कि उसले हामीलाई आफ्नो लट्ठीले देखाइरहेको, के गर्ने? – जो नेता वरिपरि उभिएका थिए, चिच्याए।
– त्यहाँ ढोका छ! त्यहाँ ढोका छ! – केटाकेटीहरु चिच्याए र ढोकामा देखायो जुन उनीहरूको सामु देखियो।
– चुप, शान्त, बच्चाहरू!
– भगवानले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, के हुँदैछ? – केहि महिलाहरू आफूलाई पार गरे।
– एक शब्द होइन! उहाँलाई थाहा छ के गर्ने। बार तल भात्काउनुहोस्!
एकैचोटि बार एसरी भात्कियो कि त्यहाँ पहिले कुनै बार नै थिएन।
तिनीहरूले बार पार गरेर गए।
कमसेकम तिनीहरू एक सय चरणमा पुगेका थिए जब नेता एक ठूलो काँडाको झाडीमा दगुरे र रोके। ठूलो कठिनाईको साथ उनले आफैंलाई बाहिर निकाल्न सके र सबै दिशामा आफ्नो लट्ठी हिर्काउन थाले। कोही पनि घुमेको छैन।
– र अब के भयो? – पछाडि ती कराए।
– काँडाको झाडी काट्नुहोस्! – नेता वरिपरि उभिएकाहरू कराए।
– काँडा झाडिहरू पछाडि त्यहाँ सडक छ! – बच्चाहरु र पछाडि धेरै मानिसहरु चिच्याए।
– त्यहाँ सडक छ! त्यहाँ सडक छ! – नेता वर पर भएकाले जोसिदै अनी रिसाउदै – अनि हामी अन्धा मान्छेहरू कसरी जान्न सक्छौं जहाँ उसले हामीलाई डोर्याइरहेको छ? सबैजनाले अर्डर दिन सक्दैनन्। नेतालाई सब भन्दा राम्रो र सिधा मार्ग थाहा छ। काँडाको झाडी काट्नुहोस्!
तिनीहरू बाटो खाली गर्न भित्र पसे।
– आउच, – कसैले हातमा काँढा अड्किएको थियो र अनी कसैको अनुहार ब्ल्याकबेरीको हाङाले चोट लगेको थियो।
– दाजुभाइहरू, केही नगरेर केहीकुरा पाउन सकिदैन। सफलताको लागि तपाईंले आफैंलाई अलि बढी तान्नु पर्ने हुन्छ, – समूहमा सबै भन्दा शाहसीले उत्तर दियो।
तिनीहरूले धेरै प्रयास पछि झाडी भाच्ए र अघि बढे।
थोरै पछि हिंडे पछि, ती मुडाको थुप्रोमा आए। यी पनि पनी फ्याक्ए। त्यसपछि तिनीहरूले यात्राा जारी राखे।
पहिलो दिनमा धेरै नै थोरै मैदान पार गरिएको थियो किनभने तिनीहरूले धेरै, समान अवरोधहरू पार गर्नुपर्‍यो। र यो सबै थोरै खानामा,कोहीले केवल सुख्खा रोटी र थोरै चिज ल्यएका थिए, कसैले भने रोटीले मात्र आफ्नो भोक पुरा गर्नु पर्‍यो। कसैसँग केही थिएन। भाग्यवस यो गर्मी को समय थियो र र तिनीहरूले यहाँ र त्यहाँ फलफूल भेट्टाए।
यद्यपि, पहिलो दिन एउटा सानो इस्त्रेच मात्र थियो तर उनीहरू अत्यन्त थाकेको महसुस गरे। कुनै ठूलो खतराहरू आएनन् र कुनै दुर्घटनाहरू पनि भएनन्। स्वाभाविक रूपमा त्यस्ता ठूला उपक्रमहरूमा निम्न घटनाहरू साधारण मानिनुपर्दछ: एउटा महिलाको देब्रे आँखामा काँडा बिझेको थियो, जसलाई उनले ओसिलो कपडाले ढाकिन्छ; एक बच्चा दाउरा मा चोट लागेर खोच्चाउदै थियो; एक वृद्ध मानिस एक ब्ल्याकबेरी झाडी मा गएकोले उसको खुट्टामा मोच आएको थियो; पिसेको प्याज हाले पछि, उसले साहसपूर्वक पीडा सहयो र आफुलाई लट्ठीमा आडायो, बहादुरी पूर्वक खोच्चाउदै नेताको पछाडि लाग्यो। (निस्सन्देह, धेरैले भनेका थिए कि ती वृद्ध मान्छेले खुट्टाको मोच नाटक गरेको जस्तो माने, किनभने ऊ फर्केर जान चाहन्थ्यो) चाँडै, त्यहाँ थोरै मानिस मात्र थिए जसले आफ्नो हातमा काँडा बिझेको वा काटिएको थिएन। पुरुषहरूले ती सबै वीरतापूर्वक सहे जबकि महिलाहरूले आफू हिडेको घण्टालाई श्राप दिए र बच्चाहरू स्वाभाविक रूपमा रोए, किनकि उनीहरूले यी सबै परिश्रम र पीडा पछी प्रशस्त पुरस्कार पाइनेछ भनेर बुझेका छैनन्।
सबैको सुख र आनन्दमा भन्दा धेरै, नेतालाई केहि पनि भएन। साँच्चै भन्ने हो भने, यदि हामी सत्य बोल्ने हो भने ऊ धेरै नै सुरक्षित थियो, तर पनि त्यो मानिस भाग्यमानी नै थियो। पहिलो रातको शिविरस्थलमा सबैले प्रार्थना गरे र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए कि त्यस दिनको यात्रा सफल भएको थियो र नेतालाई केही पनि भएन, हल्का दुर्भाग्यले पनि। त्यसपछि एक जना बहादुरी मानिस बोल्न थाले। उनको अनुहार ब्ल्याकबेरी झाडीले कोरिएको थियो तर उनले त्यसमा ध्यान दिएनन।
– दाजुभाइहरू, – उनले शुरू गरे। – एक दिनको यात्रा सफलतापूर्वक हाम्रो पछाडि छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। सडक सजिलो छैन, तर हामीले यसमा लागिरहनु पर्नेछ किनकि हामी सबैलाई थाहा छ कि गाह्रो सडकले हामीलाई खुशीमा पुर्‍याउँछ। सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरले हाम्रो नेतालाई कुनै पनि हानिबाट जोगाउनुहुनेछ ताकि उहाले हामीलाई सफलतापूर्वक अगुवाई गरिरहन सक्नुहोस्।
– म मेरो अर्को आँखा गुमाउने छु यदि भोलिपनि आज जस्तै हुने हो भने! – एउटी आइमाई रिसाएर बोलिन।
– अैया, मेरो खुट्टा! – महिलाको कुराबाट प्रोत्साहित हुँदै, वृद्ध मानिस रोए।
केटाकेटीहरू चिच्याउदै रुन थाले, र आमाहरूलाई उनीहरूलाई शान्त गर्न गाह्रो भएको थियो ताकि प्रवक्तालाई सुन्न सकून्।
– हो, तपाईंले आफ्नो अर्को आँखा गुमाउनुहुनेछ, – उसको रिस फुट्यो, – र हुनसक्छ तपाईंले दुबै गुमाउन सक्नुहुन्छ! त्यस्तो ठूलो कारणको लागि, यो कुनै ठुलो दुर्भाग्यको कुरा हैन। लाज मन्नुहोस्, के तपाईंले आफ्ना बच्चाहरूको भलाईको बारेमा कहिल्यै सोच्नुहुन्न? यस प्रयासमा हामी मध्ये आधा नष्ट हुन दिनुहोस्! यसले के फरक पार्छ? एउटा आँखा के हो? जब त्यहाँ कोही छ जसले हाम्रो लागी हेरिरहेको छ र हामीलाई खुशीमा पुर्‍याउँछ तब तपाईंको आँखाको उपयोग के हुन्छ? के हामीले केवल तपाईंको आँखा र वृद्ध व्यक्तिको खुट्टाको खातिर हाम्रो उपक्रमलाई त्याग्नु पर्छ?
– ऊ झूट बोल्दै छ! बुढो मान्छे झूट बोल्दै छ! ऊ केवल नाटक गर्दैछ, ऊ फर्केर जान चाहन्छ त्यसैले, – सबै पक्षबाट आवाज आयो।
– दाजुभाइहरू, जो कोही यो भन्दा अगाडि जान चाहँदैन, – प्रवक्ताले फेरि भन्यो – उ गुनासो गर्नु र हामीलाई बाँकीबाट हडबडाउनुको सट्टा फिर्ता जानुहोस्। जहाँसम्म मेरो कुरा छ, जबसम्म म मा केहि बाँकी रहन्छ, म यस बुद्धिमानी नेतालाई पछ्याउँदै जनेछु!
– हामी सबै पछ्याउँदै जनेछौ! जबसम्म हामी बाँचिरहेका छौं हामी सबै उहाँलाई पछ्याउँदै जनेछौ!
नेता चुप थियो।
सबैले उसलाई हेरे र कानेखुशी गर्न थाले:
– ऊ आफ्नो विचारहरु मा लिन छ!
– एक बुद्धिमान मानिस!
– उनको निधारमा हेर्नुहोस्!
– र सँधै निधार खुम्चिएको!
– ऊ साहसी छ! त्यो उसको सबै चीजमा देखिन्छ।
– तिमी त्यो फेरी भन्न सक्छौ! बार, लग, ब्रियाहरू – उसले यो सबै भात्काउने छ। उसले सोझो रूपमा आफ्नो लट्ठी ट्याप गर्दै, केहि पनि भनेन, र तपाईंले उसको दिमागमा के छ अनुमान गर्नु पर्छ।